Vaovao - fitambarana simika Furfural
Fangaro simika Furfural
Furfural (C4H3O-CHO), antsoina koa hoe 2-furaldehyde, mpikambana ao amin'ny fianakaviana furan fanta-daza ary loharanon'ny volom-borona manan-danja hafa. Izy io dia ranon-javatra tsy misy loko (teboka 161.7 ° C; hery misintona 1.1598) iharan'ny aizina amin'ny rivotra. Miparitaka ao anaty rano hatramin'ny 8,3 isan-jato amin'ny 20 ° C izy ary tsy azon'ny toaka sy ny ether intsony.
Naharitra 100 taona ny vanim-potoana nanamarihana ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny fahitana volom-borona tao amin'ny laboratoara ka hatramin'ny famokarana ara-barotra voalohany tamin'ny 1922. Ny fivoaran'ny indostria taty aoriana dia manome ohatra tsara amin'ny fampiasana indostrialy ny residu fambolena. Ny katsaka, ny vatan-kazo, ny vano vita amin'ny landihazo, ny vatan-kazo ary ny bagasse no loharanom-pitaovana lehibe, ny famenoana isan-taona izay miantoka ny famatsiana mitohy. Amin'ny fizotry ny famokarana, maro ny akora simika sy asidra solifara manalefaka no entona anaty tsindry amin'ny mpandevona rotary lehibe. Ny volom-borona noforonina dia esorina tsy tapaka miaraka amin'ny etona, ary mifangaro amin'ny distillation; ny distillate, amin'ny conduction, dia misaraka roa sosona. Ny sosona ambany, misy volon'ondry lena, dia maina amin'ny alàlan'ny fantsom-bovoka mba hahazoana fahadiovana 99 isan-jato farafahakeliny.
Furfural dia ampiasaina ho solvent mifantina amin'ny fanadiovana menaka fanosotra sy rosin, ary hanatsarana ny toetran'ny solika gazoala sy ny tahiry famerenana mitrandraka catalytic crackers. Izy io dia miasa betsaka amin'ny famokarana kodiarana mahery mifamatotra resin ary amin'ny fanadiovana butadiene ilaina amin'ny famokarana rubber vita amin'ny synthetic. Ny fanamboarana ny nylon dia mitaky hexamethylenediamine, izay ny furfural dia loharano lehibe. Ny fifehezana miaraka amin'ny phenol dia manome resins furfural-phenolic ho an'ny fampiasana isan-karazany.
Rehefa ampita etona mpiorina varahina amin'ny hafanana avo dia avo ny etona volom-bolo sy hidrogen, dia miforona ny alikaola furfuryl. Ity derivative manan-danja ity dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny plastika amin'ny famokarana simenitra tsy azo harafesina ary zavatra vita amin'ny bobongolo. Ny hydrogenation mitovy amin'ny alikaola furfuryl amin'ny catalyst nikela dia manome alikaola tetrahydrofurfuryl, izay nalaina avy amin'ny ester isan-karazany sy dihydropyran.
Amin'ny fihetsiny amin'ny maha aldehyde azy, ny furfural dia miteraka fitoviana mafy amin'ny benzaldehyde. Noho izany, izy io dia mizaka ny valin'ny Cannizzaro amin'ny alkali aqueous mahery; mihena ho furoin izy io, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, eo ambany fitarihan'ny sianide potasioma; navadika ho hydrofuramide, (C4H3O-CH)3N2, amin'ny alàlan'ny hetsika amoniaka. Na izany aza, ny fahasamihafana amin'ny volom-borona dia miavaka amin'ny benzaldehyde amin'ny fomba maro, izay hanatanterahana ohatra ny autooksidation. Amin'ny fiparitahan'ny rivotra amin'ny hafanan'ny efitrano, ny furfural dia simba ary miraikitra amin'ny asidra formika sy asidra formylacrylic. Ny asidra Furoic dia kristaly fotsy fotsy matevina ilaina amin'ny famonoana bakteria sy fitehirizana. Ny esterany dia ranoka manitra ampiasaina ho fangaro amin'ny menaka manitra sy manitra.